Tsy misy ny toerana manodidina Mods nametraka hita ao FSX sy P3D
fanontaniana Tsy misy ny toerana manodidina Mods nametraka hita ao FSX sy P3D
1 taona 10 volana lasa izay - 1 taona 10 volana lasa izay #450 by StargateMax
Tena mahagaga fa tsy misy olon-kafa no mbola niresaka momba izany.
Izaho efa nametraka tsara tarehy maro ampiana-ons no alaina avy amin'izany toerana, heverina ho iray na roa FSX sy Prepar3D. Tsy misy ny sceneries maneho ny tao ny lalao (s) na inona na inona. Ny fiaramanidina ampiana-ons miasa tsara, fa tsy toy izany aho liana amin'izany.
Izaho koa alaina Hawaii ity toerana tsara tarehy, efa ho 7 GB, ary Kauai koa. Zavatra tsy hitako eo amin'ny lalao dia toerana misy anao tontolo crappy tahaka teo aloha.
Inona no mety ho ny olana?
Last edit: 1 taona 10 volana lasa izay StargateMax.
1 taona 10 volana lasa izay #451 by Dariussssss
Voalohany indrindra, dia heveriko fa manaja ny hoe manao ahoana.
Faharoa, aza manao ahy mananatra anareo.
Fahatelo, more Info.
1 taona 10 volana lasa izay #452 by StargateMax
1) Miarahaba (miala tsiny)
2) Eto aho hoe: Vakio ny 4 eto ambany.
4) Ok, lasa aho, tsy misy ahiahy amiko, toa tahaka ny mihevitra isika tsirairay samy mahalala fomba hafa.
1 taona 10 volana lasa izay #453 by Gh0stRider203
StargateMax nanoratra hoe:
Heveriko Fantatro ny Hawai'i iray miteny avy. Na dia mety mametraka Mety tsy maintsy manampy azy ny lalao, tanana. Tsy tena azo antoka NAHOANA izany, saingy indraindray izany ny raharaha.
Raha toa ianao antoka ny fomba hanaovana izany lemme mahalala ary afaka manampy ya amin'ny izay
1 taona 10 volana lasa izay - 1 taona 10 volana lasa izay #454 by Dariussssss
Aoka ny manao izany toy izao ...
Voalohany, tsy maintsy milaza amiko zavatra sasany ...
No mametraka izany araka ny tokony ho?
No mampihetsika ny toerana manodidina ao amin'ny FSX?
Iza toerana manodidina Packs no miezaka ny hametraka?
Be dia be ny toerana tsara tarehy alaina avy eto, sy ny rehetra izany ny miasa, raha manao izany tsara.
1 taona 10 volana lasa izay #457 by StargateMax
Aoka isika hanomboka vaovao, mahatsapa tsara kokoa izany. Miala tsiny ny ambony.
Dia nametraka fa lehibe Hawaii photoreal Boky Faha-1-2-3 entana, Kauai, Mt. Everest, Fidji, nosy Balearic v2.
Ny installers nilaza fa izy no tonga dia nametraka ary Nihevitra fa hasehoko ao ny toerana manodidina Library.
Aho nahita zava-baovao ao amin'ny Scenery Library (roa lalao).
Kanefa nitodika aho nandinika an-Adaona Scenery fampirimana (roa lalao), ary tsy nisy na inona na inona no efa napetraka. Izaho koa nihevitra fa natao napetraka mitokana, fa izaho kosa tsy afaka ny toerana izy ireo mba hanampy azy ireo tanana.
Raha manoratra eto aho izany valin tampoka nahazo fahazavana jiro fotoana. Dia nijery an-Scenery (fa tsy "Adaona") fampirimana ary scrolled lavitra teo, ka nahita azy tao ka! Ary manampy azy ireo ny toerana manodidina Library avy tany manao ny asa.
Mihevitra aho fa natao voavaha. Misaotra anao noho ny mandefitra ny toe-tsaina, tena nahatezitra aho rehefa afaka andro messing 2 izany.
Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia manampy olon-kafa izay mety tojo izany olana nataoko.
1 taona 10 volana lasa izay #464 by Dariussssss
Izany no tsara kokoa.
I nanana toy izany koa happening.Don't hoe nahoana, fa ny installers manao zavatra ratsy ratsy. Iray ihany no azo vaovao no tena ilaina.
Mahafinaritra ny mahita fa ny miasa. Koa ankehitriny nahazo azy fa amin'ny manaraka, rehefa misy zavatra tsy miasa., Lazao aminay araka izay azo atao, izay hanampy antsika rehetra mba hamaha ny olana.
Fotoana mamorona pejy: 0.343 segondra